Optimizing gị Email Images maka Retina Ngosipụta | Martech Zone
Dị ka ngosipụta dị elu na-aghọ ebe a na-ahụkarị na ngwaọrụ ọ bụla, ọ dị mkpa na ndị na-ere ahịa na-eji mmetụta nke mkpebi dị elu enye. Ihe doro anya nke ihe oyiyi eji na ozi ịntanetị, dịka ọmụmaatụ, nwere ike inwe mmetụta dị egwu na onye na - agụ email. Creatmepụta ihe eserese gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị wee sụgharịa / lelee ha - ha niile ka hazie ogo faịlụ nke ihe onyonyo - ọ bụ nlezianya siri ike iji hụ na edobere gị maka nzaghachi kachasị mma na pịa site na ọnụego na ozi ịntanetị gị.
Ihe omuma a sitere na ndi mọnk Email, Retina Email - Gbanwee Ahụmịhe Onye Ọrụ yana Ngosipụta Dị Elu, na-agwa gị ndụmọdụ ngwa ngwa banyere otu esi esi mepụta ozi ịntanetị enyi na enyi, na-eburu n'uche onyonyo zuru oke, nha faịlụ faịlụ, ajụjụ mgbasa ozi maka imewe ozi email na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
Tags: ikukuemail imeweozi infographicndị mọnk emailelu mma ngosiipadmini miniiphoneMacbook 3retina ngosipụtaemail retinaretina mkpebi